Otu izu ma ọ bụ karịa gara aga, a gwara m ka m kwuo okwu na mmemme mpaghara na Intanet nke Ihe. Dịka onye na-akwado pọdkastị Dell Luminaries, enwere m ụda nke ikpughe na Edge Mgbakọ na teknụzụ ọhụụ nke amalitelarị ịmalite. Agbanyeghị, ọ bụrụ n'ịchọrọ ị nweta ohere ịzụ ahịa n'ihe metụtara IoT, a naghị ekwu ụka nke ọma n'ịntanetị. N'ezie, ọ na-ewute m ebe ọ bụ na IoT ga-agbanwe mmekọrịta dị n'etiti
Ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ ejikọrọ na inntanetị na ụlọ m na ọfịs na-eto kwa ọnwa ọ bụla. Ihe niile anyị nwere ugbu a nwere ebumnuche pụtara ìhè - dị ka njikwa ọkụ, iwu olu, na thermostat mmemme. Agbanyeghị, njigide nke teknụzụ na-aga n'ihu na njikọta ha na-eweta ọgba aghara azụmahịa dịka anyị ahụtụbeghị mbụ. Na nso nso a, ezigara m otu ofntanetị nke Ihe: Digitize or Die: Gbanwee nzukọ gị. Nabata